VAWLEIPI THEIH IN RALHRANG AN MUALPHO CANG HIH – The Chinlung Post
July 15, 2021 admin Kawlram 0
Kawlram mipi Covid Zawtnak an tei khawhnak ding caah tiah Vawleicung ramkip in bomhnak an pek mi US Dollar million 350 hi Kawl ralkap nih maw an fir, ziah mipi caah an hman lo, hi bomhnak phaisa vialte hi mipi Covid ral in an himnak ding ah an hman awkasi tiah UN Palai nih fak ngai in biaachim nolh cang.Min Aung Hliang hruaimi Ralkap nih Myanmar mipi uknak an lak hlan tiang ah, Kawlram mipi Covid raldohnak ah tiah vawleicung ramkip bomhnak hi US dollarin million 350asi.
Hi Phaisa vialte hi ziah ralkap nih maw an fir dih nolh, Kawlram mipi Covid ral nihathah cuahmah cang hna hi teh, cu vialte phaisa cun mipi an khamh nak dingasi tiah UN Palai pical taktakasimi Tom Andrews nihachim hiasi. Hi phaisa vialte hi ramkip nih Kawlram mipi Covid ral dohnak ding caah bomhnak an pek miasi nain, nihin tiang cu phaisa cu an hmang lo, ralkap nih zeitin dah an tawlrel timi theihasi lo.
Min Aung Hliang hruaimi Ralkap nih rampi uknak an lak lai te ah khan, US dollar in million 350 cu Kawlram mipi Covid raldohnak caah bomhnak pek asi. Cu bomhnak vialte cu Covid raldohnak ah hman ding tiah pek miasi fawn. A si nain nihin tiang ralkap nih zeitin dah an tawlrel timi zong theihasi fawn lo. An fir bia mawasi, an hman cang awkasi lo maw tiah Tom Andrew nih cunachim hiasi.
Tlaamtling Tein Kawlca in relchih:ကိုဗစ်အတွက် နိုင်ငံတကာပေးထားတဲ့ ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀ စစ်ကောင်စီ ခိုးထားသလား၊ အဲဒီငွေတွေ ထုတ်သုံးဖို့ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် တိုက်တွန်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကြောင့် အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေကို နိုင်ငံတကာက ချက်ချင်း ဝင်ရောက်ဖို့ ကုလကိုယ်စားလှယ်သတိပေး ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှု မတိုင်မီ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအတွက် နိုင်ငံတကာက ပေးထားသည့် ကိုဗစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀ကို စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရန် ကုလသမဂ္ဂ၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews က ယမန်နေ့က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
လက်ရှိတွင် အဆိုပါ ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀ ကို စစ်ကောင်စီက မည်သို့ အသုံးချထားသည်ကို မသိရှိရဘဲ ယင်းငွေကြေးမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသ ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာက ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေဖြင့် စစ်အာဏာမသိမ်းခင် နိုင်ငံတကာက ထောက်ပံ့ထားသော ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀ ကိုလည်း ထုတ်ယူ သုံးစွဲရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းကထောက်ပြသည်။ “စစ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီ ရက်အနည်းငယ်ကမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသရေး နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော COVID အကူအညီဒေါ်လာသန်း ၃၅၀ ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကအကုန် အကျခံရန်လိုအပ်သည်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလွန်ဆိုးဝါးသော ကိုဗစ်အခြေ အနေကြောင့် ပြည်သူ လူထု အတွက် အကျပ်အတည်း ဖြစ်လာနိုင်၍ နိုင်ငံ တကာ အနေဖြင့် ဝင်ရောက်ကူညီကြရန် ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူက ပြောဆိုသည်။ “ကိုဗစ်မျိုးကွဲ Delta ပေါက်ကွဲကူးစက် ပြန့်ပွားနေတာ၊ ကျန်းမာရေး စနစ်တစ်ခုလုံး ပြိုလဲနေတာ၊မြန်မာလူထုတွေက စစ်ကောင်စီကို လုံး၀ အယုံအကြည်မရှိတော့တာတွေက မြန်မာလူထုရဲ့ အသက်တွေကို ခြွေမယ့် ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေ အနေတွေပါပဲ။တကယ်လို့ နိုင်ငံတကာ အကူအညီမရဘူးဆိုရင် တကယ့်ကို ဆိုးဝါးမယ့်အခြေအနေတွေပါ” ဟု ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းရေးအရာရှိ Tom Andrews က ပြောဆိုသည်။
လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ အခြေခံ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကတော့ အမြင့်မားဆုံးသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ရယူခွင့်ရှိတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခု အဲဒီအခွင့် အရေးက မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ငြင်းပယ်ခံနေရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ ဒါကို ချက်ချင်း တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းရေးအရာရှိက ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ ဂျနီဗာ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးတွင် လည်း မြန်မာပြည်သူများအတွက် အရေးပေါ် နိုင်ငံတကာမဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး ကူညီကြရန်လည်း တိုက်တွန်းထားသည်။ “စစ်တပ်မှာ အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေမရှိပါဘူး။ ဒီအကျပ်အတည်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လည်း တရားဝင်မှု မရှိဘူး။ လူထုရဲ့ ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ မြန်မာ့အကျပ်အတည်း ဟာ သေလောက်စရာပါပဲ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
နိုင်ငံတကအနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ ယုံကြည်လက်ခံနိုင်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးမှု အပါဝင် စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့စည်းအတွေရဲ့ ကိုဗစ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု တွေကို ကူညီရပါမယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ အကူအညီတွေကို သေဆုံးမှုနှုန်းတွေ မမြင့်တက်ခင် ကူညီဖို့ ဆန္ဒရှိသလို ကူညီဖို့ နိုင်ရမှာပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ မြန်မာပြည်သူတွေကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရှိတော့တာနဲ့ ယုံကြည်မှုမရှိတာကြောင့် သေဆုံးနေရပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။ အကျဉ်းထောင်အတွင်းတွင် လက်ခံနိုင်သည့် ပမာဏထက် အကျဉ်းသားအရေ အတွက် များပြားနေပြီး အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိ ထိရှယ်လွယ်သော ပြည်သူ များ အတွက် စိုးရိမ်ကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။